Intengo Ehle Ebunjiwe Yekhabhoni China Manufacturers & Suppliers & Factory
Intengo Ehle Ebunjiwe Yekhabhoni - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Intengo Ehle Ebunjiwe Yekhabhoni)
Umkhiqizo we-OEM / owenziwe ngokwezifiso wekhabhoni
Umkhiqizo we-OEM / owenziwe ngokwezifiso wekhabhoni Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu- 400x500mm . Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi e-fiber. Insiza...
OEM Factory Intengo Aluminium Anodized Inkinobho Flange nati
OEM Factory Intengo Aluminium Anodized Inkinobho Flange nati Isingeniso Somkhiqizo I-nut iyingxenye exhuma ngokuqinile imishini yokusebenza. I-nut yokuchazwa okufanayo ingaxhunywa ngentambo yangaphakathi. Isibonelo, i-nati ye-M4-P0.7 ingaxhunywa kuphela nge-bolt yochungechunge lwe-M4-P0.7 (ku-nati) Ngaphandle...
intengo eshibhile i-M3 Anodized Round knacging spacer
Intengo enhle ye-M3 Knurled Anodized Round Aluminium Standoff
Intengo enhle ye-M3 Knurled Anodized Round Aluminium Standoff I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe-aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Kukhona okuqhubekayo phakathi kohlangothi nesimo sesilinda, futhi ukwakheka kwangaphakathi...
I-Aluminium Spacers Ace Hardware Factory Intengo Yezitolo
I-Aluminium Spacers Ace Hardware Factory Intengo Yezitolo I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ku-Carbon fiber kanye ne-hardware cishe iminyaka eyishumi. Ukuze sihlangabezane nesidingo samakhasimende amaningi, senza izinhlobo eziningi zalokhu okuqhamukayo njenge-aluminium hex standoff, ukuma...
Intengo ephansi i-T300 CNC yokusika i-carbon fiber plates
Intengo ephansi i-T300 CNC yokusika i-carbon fiber plates Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane...
Ukuncintisana Intengo Aluminium Slotless Rivet Standoff M3 Spacer
Ukuncintisana Intengo Aluminium Slotless Rivet Standoff M3 Spacer Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Kukhona okuqhubekayo phakathi kohlangothi nesimo sesilinda, futhi...
Ikhwalithi ephezulu yekhabhoni e-3k eyenziwe nge-3k ejikeleziwe
Izinga eliphakeme elenziwa ngezifiso lamakhabhoni e-carbon angama-3k Lawa Khabhoni we-3K Carbon Fubes Carbon enziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala namasayizi ahlukahlukene (imibala evamile emnyama); Izinhlobo ezenziwe ngokwezifiso zamukelwa, njengobubanzi...
I-100% yekhabhoni eyindilinga eyenziwe nge-carbon fiber tube Izici ze-1.Carbon tube / pipe: Lawa Khabhoni we-3K Carbon Fubes Carbon enziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala namasayizi ahlukahlukene (imibala evamile emnyama); Izinhlobo ezenziwe ngokwezifiso...
Intengo ekhangayo ye-titanium alloy ngesithuthuthu
Intengo ekhangayo ye-titanium alloy ngesithuthuthu I-Titanium Alloy Screw Feriorer ingasetshenziswa yonke indawo. I-Titanium Screw ingasebenzisa entanyeni yesiginci I-Beside enemibala e-Titanium Screws, futhi sinama-Screws Wokuzenzela, Ama-Standoffs Anziwe, Ama- Washers Ezifiso Incazelo
500x600mm ikhwalithi ephezulu yekhabhoni eyakhiwe
500x600mm ikhwalithi ephezulu yekhabhoni eyakhiwe Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu- 400x500mm . Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi e-fiber. Insiza ye-OEM...
Ikhwalithi ephezulu yekhabhoni eyakhiwe
Ikhwalithi ephezulu yekhabhoni eyakhiwe Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu- 400x500mm . Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi e-fiber. Insiza ye-OEM ne-ODM...
Ikhampasi Ibha ye-Aluminium Ehlengekayo Ngokushesha
Ikhampasi Ibha ye-Aluminium Ehlengekayo Ngokushesha Incazelo Yomkhiqizo I-Round carbon fiber tube clamp isetshenziswa kabanzi emkhakheni we-drone.Nxa inenzuzo elula yesisindo, amakhasimende amaningi ajabule ngezinto ze-aluminium. Ubulukhuni be-aluminium engu-6061 banele.Certianly, uma udinga i-super hard, mhlawumbe...
Ifektri Intengo M3 Titanium Hex Socket Screw
Ifektri Intengo M3 Titanium Hex Socket Screw Sinezinhlobo zonke zohlobo lwekhanda lesigaxa se-titanium, imibala yemvelo nesiliva. Izikulufo zeTitanium zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sazo sokukhanya namandla aphezulu. Banamandla kakhulu kune-aluminium material screws. Kodwa umbala wazo awunambala njengama-aluminium...
Intengo yefektali enemibala ye-aluminium flange nylon yokukhiya
Intengo yefektali enemibala ye-aluminium flange nylon yokukhiya Isingeniso Somkhiqizo I-Aluminium Fasteners ifaka i-aluminium cage nuts flange serated. Uhlobo lwe-M2.5 Cage Aluminium Serrated Nuts yi-flange serated nut. M2.5 amantongomane e-aluminium cage ngokuvamile anodised. Izici zokuzivalela: Ngokomgomo wokuqamba,...
Intengo eshibhile 1/4 - 20 serated flange hex yokukhiya amantongomane
Intengo eshibhile 1/4 - 20 serated flange hex yokukhiya amantongomane Amantongomane okuzikhiya kwe-Aluminium alungele izesekeli ze-drone, okwenza i-drone iyonke ibukeka yinhle kakhulu. Emantongomane sinamantongomane amaningi e-aluminium, amantongomane angensimbi, amantongomane e-hexagon nuts ne-nylon hexagon nut...
Intengo ephansi yekhabhoni fiber OEM cnc machining ingxenye
Intengo ephansi yekhabhoni fiber OEM cnc machining ingxenye Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukutholwa kanzima. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kudingekile kuphela...
Intengo yefektri i-OEM Carbon fiber Helicopters mutilrotors
Intengo yefektri i-OEM Carbon fiber Helicopters mutilrotors Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukutholwa kanzima. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kudingekile kuphela...
Ipuleti engu-3K Enemibala KaKhisimusi engu-100% Iplanethi Yekhabhoni
Ipuleti engu-3K Enemibala KaKhisimusi engu-100% Iplanethi Yekhabhoni Ngokuvamile, abantu bangathanda ukusebenzisa amapuleti e-fiber carbon. Futhi singanikeza ngefreyimu yeplanethi yelayisensi ye-carbon fiber enemibala. Inkonzo ye-OEM & ODM iyatholakala. (4) Lapho ibhodi ye-carbon fiber inamathiselwe, i-glue...
Intengo yeshidi ye-carbonX sheet engu-0.5X250X450mm carbon fiber sheet ye-UAV
I-0.5X250X450mm intengo Yomkhiqizo weCarbon Fibet Sheet ye-UAV I-0.5X250X450mm intengo ekhanyayo ye-carbon fiber sheet ye-UAV isetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo zezesekeli zensimbi, izimpahla zesikhumba, amapeni, izincwadi zokubhala, ubucwebe, ifenisha nokunye ukuhlobisa okungaphezulu komhlaba. imishini...
Intengo Ehle Ebunjiwe Yekhabhoni I-Tube Eqondile Yekhabhoni Intengo Yefekithali Ehlanganisiwe yeCarbon Fibre I-Roll Ehlanganisiwe Yekhabhoni ye-Carbon Fub Ifektha Elakhiwe Ngekhabhoni Yekhabhoni Ingxenye Yekhampasi Yekhabhoni Yakho Intengo Yesikhwama se-Carbon Fibre Ibhodi Yezindwangu Eziphezulu Zekhabhoni